Uyifaka njani iGitlab kwiserver yethu noBuntu | Ubunlog
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo besisazi ukuthengwa ngesiquphe kweGitHub nguMicrosoft. Ukuthengwa okunempikiswano abaninzi abakhusela ngokungathi bayenzile okanye bayigxeka ngokungqongqo ngokungathi kukufika kokuwa kweSoftware yasimahla. Ngokwam, andikholelwa okanye ndikhusele nokuba yeyiphi na kwezi zithuba zibini kodwa kuyinyani ukuba ezo ndaba zibangele uninzi lwabaphuhlisi besoftware bayeke iinkonzo ze-Github kwaye bajonge ezinye iindlela simahla njengeGithub ngaphambi kokuthengwa kwabo nguMicrosoft.
Zininzi iinkonzo eziya zithandwa, kodwa uninzi lwabaphuhlisi bakhetha ukusebenzisa iGitLab, enye indlela yasimahla esinokuyifaka kwikhompyuter yethu noBuntu okanye kwiseva yabucala esebenzisa Ubuntu njengenkqubo yokusebenza.
1 Yintoni iGitLab?
2 Sifuna ntoni ukufaka iGitLab kwiseva Ubuntu?
3 Ukufakwa kweGitLab
4 Uqwalaselo lweGitlab CE
5 IGitlab okanye iGitHub yeyiphi engcono?
Kodwa okokuqala, makhe sibone ukuba yintoni kanye kanye. IGitlab yinkqubo yolawulo lwesoftware esebenzisa itekhnoloji yeGit. Kodwa ngokungafaniyo nezinye iinkonzo, ibandakanya eminye imisebenzi ngaphandle kweGit njengenkonzo ye-wikis kunye nenkqubo yokulandela umkhondo we-bug. Yonke into inelayisensi phantsi kwelayisensi yeGPL, kodwa kuyinyani ukuba njengezinye iintlobo zesoftware ezinje ngeWordPress okanye iGithub uqobo, nabani na akanakusebenzisa iGitlab. IGitlab inenkonzo yewebhu enikezela ngeentlobo ezimbini zeeakhawunti kubaxhasi bayo: iakhawunti yasimahla ngeendawo zokugcina ezasimahla nezesidlangalaleni kunye nenye iakhawunti ehlawulelweyo okanye yeprimiyamu esivumela ukuba senze iikhowudi zabucala nezikarhulumente.
Oku kuthetha ukuba yonke idatha yethu ibanjisiwe kwiiseva ezingaphandle kuthi esingenakho ukulawula, njengoko kunjalo ngeGithub. Kodwa iGitlab inenguqulo ebizwa ngakumbi IGitlab CE o Ushicilelo loLuntu oluya ivumela ukuba sifake kwaye sibe nemeko yeGitlab kwiseva yethu okanye ikhompyuter kunye no-Ubuntu, nangona eyona iluncedo kukuyisebenzisa kwiseva ene-Ubuntu. Le software isinika izibonelelo zeGitlab Premium kodwa ngaphandle kokuhlawula nantoni na, kuba sifaka yonke isoftware kwiseva yethu hayi kwenye iseva.
IGitlab, njengenkonzo yeGithub, ibonelela ngezixhobo ezinomdla njenge Ukwenza iindawo zokugcina izinto, ukuphuhlisa amaphepha ewebhu amileyo ngesoftware yeJekyll okanye ulawulo lwenguqulo kunye nekhowudi eya kusivumela ukuba saziswe ukuba isoftware okanye uhlaziyo luqulathe naziphi na iimpazamo okanye hayi.
Amandla eGitlab angaphezulu kweGithub, ubuncinci ngokweenkonzo, ukuba siyisebenzisa njengesoftware yethu, amandla aya kuxhomekeka kwizixhobo zekhompyutha zethu. Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba into esiza kuyenza kukutshintsha isoftware yeGithub yesoftware yeGitlab kwiseva yethu yabucala.
Sifuna ntoni ukufaka iGitLab kwiseva Ubuntu?
Ukuba neGitlab okanye iGitlab CE kwiseva yethu, kuqala Kuya kufuneka sifake ukuxhomekeka okanye isoftware efunekayo ukuze isoftware isebenze ngokuchanekileyo. Ukwenza oku sivula i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Ngokunokwenzeka iphakheji enje nge-curl iya kuba sele ikho kwikhompyuter yethu kodwa ukuba ayisiyiyo, eli lixesha elifanelekileyo lokufaka.
Ngoku sinako konke ukuxhomekeka kweGitlab, Kuya kufuneka sifake isoftware yeGitlab CE, esidlangalaleni kwaye singayifumana ngokugcina ngaphandle Ubuntu. Ukwenza oku sivula i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Kukho enye indlela ebandakanya ukusebenzisa indawo yokugcina yangaphandle kodwa isixhobo sokufumana isoftware. Ukwenza oku, endaweni yokubhala apha ngasentla kwisiphelo sendlela, kufuneka sibhale oku kulandelayo:
Ngale nto siza kuba nesoftware yeGitlab CE kwiseva yethu Ubuntu. Ngoku lixesha lokwenza useto olusisiseko ukuze lusebenze ngokufanelekileyo.
Uqwalaselo lweGitlab CE
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khulula izibuko ezithile Esebenzisa iGitlab kwaye iya kuvalwa kwaye sisebenzisa i-firewall. Izibuko ekufuneka silivulile okanye elisebenzisiweyo yiGitlab lizibuko 80 kunye no-443.
Ngoku, kufuneka sivule isikrini sewebhu seGitlab CE okokuqala, kuba oku sivula iphepha lewebhu http://gitlabce.example.com kwisikhangeli sethu. Eli phepha liza kuba lelo leseva yethu kodwa, ukuba lixesha lokuqala, kufuneka tshintsha iphasiwedi enesixokelelwano esingagqibekanga. Nje ukuba sitshintshe iphasiwedi, kufuneka sibhalise okanye ngena ngegama lokugqitha elitsha kunye "nengcambu" umsebenzisi. Ngale nto siyakuba nendawo yoqwalaselo lwabucala lwenkqubo yeGitlab kwiseva yethu yoBuntu.
Ukuba iseva yethu isetyenziselwa uluntu, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka sisebenzise i-https protocol, umthetho olandelwayo wewebhu osebenzisa izatifikethi ukwenza ukhangelo lwewebhu lukhuseleke ngakumbi. Singasebenzisa nasiphi na isatifikethi kodwa iGitlab CE ayitshintshi ngokuzenzekelayo i-url yokugcina izinto, ukuze siyenze le nto ngesandla, sihlela ifayile /etc/gitlab/gitlab.rb kwaye nangaphandle_URL kufuneka sitshintshe idilesi endala yale intshaKule meko, iya kuba kukongeza unobumba "s", kodwa sinokwenza i-url yahluke kwaye sandise ukhuseleko kwiseva yethu yewebhu. Nje ukuba sigcine kwaye sivale ifayile, kuya kufuneka sibhale oku kulandelayo kwisiphelo sendlela ukuze utshintsho olwenziwe lwamkelwe:
Oku kuyakwenza lonke utshintsho esilenzayo kwisoftware yeGitlab ukuba iqale ukusebenza kwaye iya kuba ilungele abasebenzisi bale nkqubo yolawulo lwenguqulo. Ngoku singasebenzisa le software ngaphandle kwengxaki kwaye ngaphandle kokuhlawula nantoni na ukuba neendawo zokugcina zabucala.
IGitlab okanye iGitHub yeyiphi engcono?
Okwangoku, ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luya kuzibuza ukuba yeyiphi isoftware ekungcono ukuyisebenzisa okanye ukwenza indawo yokugcina isoftware yethu. Nokuba uyaqhubeka neGithub okanye nokuba utshintshele kwiGitlab. Zombini zisebenzisa iGit kwaye zinokutshintshwa okanye ukuhambisa ngokulula isoftware eyenziweyo ukusuka kwindawo enye ukuya kwelinye. Kodwa ngokobuqu Ndincoma ukuqhubeka neGithub ukuba sinayo kwiserver yethu kwaye ukuba asinanto ifakiweyo, emva koko kufuneka sifake iGitlab. Isizathu soku kungenxa yokuba ndicinga ukuba ukuvelisa kungaphezulu kwako konke, kwaye ukutshintsha isoftware enye ukuba izibonelelo zayo ziphantse zincinci akubuyisi mali.
Into emnandi ngayo kukuba zombini ezi zixhobo ziSoftware yasimahla kwaye ukuba siyazi Yenza oomatshini abonakalayo, sinokuzivavanya zombini iinkqubo kwaye sibone ukuba yeyiphi na efanelekileyo kuthi ngaphandle kokutshintsha okanye ukonakalisa iseva yethu Ubuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Uyifaka njani iGitlab kwiseva yethu ene-Ubuntu
Edgar Albalate Ibañez sitsho
Ndisebenzisa enye indlela ebizwa ngokuba yi-gitea. https://github.com/go-gitea/. Ungazama ngaphakathi https://gitea.io
Phendula uEdgar Albalate Ibañez
Imidlalo yethu yedayinaso https://dinosaurgames.org.uk/ nikeza ukonwabisa kunye nezilwanyana kwizigidi zeminyaka eyadlulayo! Unokulawula ii-neanderthals kunye nalo lonke uhlobo lweedinos; I-Tyrannosaurus Rex, iVelociraptors, kunye neBrachiosaurus zonke zenziwe! Amanqanaba ethu eedinosaurs aqukethe iintlobo ezahlukeneyo zomdlalo wokudlala, ukusuka ekulweni ukuya kumava kwi-online poker. Ungadlala naluphi na uhlobo lomqobo owufunayo, ekunike ukonwatyiswa kwangaphambili kwimbali! Yilwa njengabemi bomqolomba ngokuchasene nezidalwa, jikeleza umhlaba, kwaye utye neentshaba zakho!
Isikhombisi sokuqala esisekwe kwiQela lomntu wokuqala! Fumana ukophuka! Khetha iklasi yakho kwaye uphelise neentshaba zakho nge-eggstreme bias kule 3d yokudlala umdlalo. Khupha izixhobo ezibulalayo njengeScramble Shotgun kunye ne-EggK47 njengoko ukhangela indlela yakho yokuphumelela. Yixabise abaShellshockers abaVulwanga https://shellshockersunblocked.space/